‘समृद्धिको मोडल बनाउने योजना छ’ « Loktantrapost
‘समृद्धिको मोडल बनाउने योजना छ’
२८ जेष्ठ २०७४, आईतवार १४:२९
सधैं नोटबुक, मार्कर र डस्टर बोकेर दमक बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा चहार्ने गीता अधिकारीको दैनिकी केही दिनयता बदलिएको छ । अहिले उनी चक डस्टर बिसाएर हातमा झण्डा बोकेर हिडेकी छिन् । जीवनका २८ बर्ष विद्यार्थीबाट घेरिएकी उनी केही दिनदेखि एमाले कार्यकर्ता, मतदाता र शुभेच्छुकबाट घेरिएकी छिन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दमक नगरपालिकामा नेकपा(एमाले)का तर्फबाट उपमेयरको उम्मेद्वारी पाएपछि उनको दैनिकी बदलिएको हो ।
को हुन गीता अधिकारी
सबैले उनलाई गीता मेडम भनेर चिन्छन् । त्यसपछि उनलाई गीता अधिकारी भनेर चिन्छन् । नागरिकतामा लेखिएको उनको नाम गीता कुमारी पौडेल(अधिकारी) हो ।
झापाको साविक दमक नगरपालिका वडा नम्बर–१० हाल¬–५ नम्बर वडाकी स्थायी बासिन्दा गीताकुमारी अधिकारीले दमक नगरपालिकाका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएकी छिन् । गीताकुमारी दमक बहुमुखी क्याम्पसमा २८ बर्षदेखि अर्थशास्त्र अनवरत रुपमा प्राध्यापन गर्दै आएकी प्राध्यापक हुन् । झापाको साविक गौरीगञ्ज गाविस वडा नम्बर ७ मा स्व. पिता लोकनाथ पौडेल स्व.माता सावित्राका कोखबाट बि. सं. २०१९ कार्तिक २५ गते जन्मिएकी उनी ७ छोरी मध्येकी कान्छी हुन् । दिदी दाजुले भने जस्तो गरी पढ्ने न त समय थियो न आर्थिक अवस्था । तर, आमाले अक्षर चिनेकै कारण सन्तानलाई शिक्षा दिनु पर्छ भन्ने मान्यताका कारण गीताले पढ्ने अवसर पाइन । बाबुको निधनपछि ११ जना छोराछोरीको पालनपोषण र शिक्षा आमालाई कम चुनौति थिएन । तर सानैदेखि राम्रो पढाइ भएका कारण आमाले उति आर्थिक बोझ झेल्नु परेन । २०४६ सालमा दमकका मदन अधिकारीसँग विवाह बन्धनमा बाधिएकी उनी एक शालिन र शान्त स्वभावकी प्राध्यापक भएकै कारण पनि समाजमा उतिकै भिजेकी छिन् ।
२०४६ सालमा बहुदलको पक्षमा जनमत बन्दै गर्दा र राजनीतिक पार्टीहरुले जनआन्दोलनको तयारी गदै गर्दा गीताले पनि तत्कालिन नेकपा मालेको सदस्यता लिइन् । पार्टीले पत्याएर दिएको त्यो आधिकारिक दस्तावेज पाएको झण्डै २८ बर्षपछि फेरी पार्टीले उनलाई विश्वास गरेर दमक नगरपालिकाको उपप्रमुखको उम्मेद्वारी दिएको छ । गीता भन्छिन्–‘पार्टीले मलाई दिएको सदस्यताको कहिले दुरुपयोग गरिन । त्यसपछिका जिम्मेवारी सधैं कुशलतापूर्वक निवार्ह गरि नै रहे । उपमेयरको उम्मेद्वारी पनि मेरो जीतका लागि हो । यसमा पार्टीलाई धन्यवाद दिंदै दमकबासीको समृद्धिको लागि सदैव खटिनेछु ।’
२०४६ सालदेखि नेकपा एमालेको दमक नगर कमिटिको सदस्य बनेकी उनी अनेमसंघमा आबद्ध भइन् । त्यस्तै गरी नेकपा एमाले बुद्धिजिवि परिषद झापाको एक कार्यकाल उपाध्यक्ष बनेकी उनी दमक नगर कमिटिको दुई कार्यकाल सदस्य रहदै सचिवालय सदस्यसमेत रहिन् । हाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन दमक बहुमुखी क्याम्पस एकाइकी अध्यक्ष, बुद्धिजीवी परिषद झापा क्षेत्र नम्बर ७ की क्षेत्रीय अध्यक्ष छिन् । यस्तै रेडक्रस सोसाइटी दमक उपशाखाको कोषाध्यक्षलगायतका बिभिन्न संघ संगठनमा आवद्ध छिन् ।
प्रारम्भिक अध्ययन गौरीगञ्जबाटै सुरु भएको गीताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपनि आमाको हौसला र प्रेरणाले कहि कतै रोकिएन । बरु पढाइमा अब्बल उनको एमएसम्मकै अध्ययन छात्रवृतिमा सकियो । गौरीगञ्ज माविबाट २०३७ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी उनले काठमाडौंको सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस लैनचौरबाट आइ ए सकिन । त्यसपछि भने उनी पूर्व फर्किन र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस बिराटनगरबाट बिएको अध्ययन पूरा गरिन् । बि स २०४६ सालमा किर्तिपुर क्याम्पसबाट एम ए सकेकी उनले त्यसै सालदेखि दमकको बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन सुरु गरिन् । एक बर्षपछि २०४७ सालमा भने आधिकारीक रुपमा नियुक्ति पाइन् । हाल उनी दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अशोशियट प्रोफेशर अर्थात सहायक प्राध्यापकको पदमा छिन् ।
अर्थशास्त्र विषयमा २०७० सालमा एमफिल गरेकी गीताकुमारी अहिले चुनाबी चटारोमा होमिएकी छन् । घर–घरमा मत माग्दै हिडिरहेकी गीता आफुले आर्जेको ज्ञान सीप र व्यवहारमा उतार्ने एउटै मौका रहेको बताउँछिन् । ‘२८ बर्षसम्म मैले शिक्षाको ज्योती छरेर समाजिक चेतना जगाए । अब पार्टीले समाज सेवाको नयाँ क्षेत्रमा मलाइ खटाएको छ । अब जनप्रतिनिधी भएर नयाँ ढंगले समाजसेवा गर्ने हो’, अधिकारी भन्छिन्–‘२८ बर्षसम्म प्राध्यापन गरेको मेरो अनुभव र सीप दमक नगरको विकास र समृद्धिका लागि कामयावी हुनेछ ।’ गीता भन्छिन् –‘समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीहरुसंगको संगतले मलाई समाज बुझ्न सजिलो बनाएको छ । विद्यार्थीसंगको संगतबाट आर्जन गरेको सामाजिक ज्ञान अब म दमकको समाज रुपान्तरणका लागि उपयोग गर्नेछु ।’
गीता यतिबेला रोमाञ्चित छिन् । यस कारण कि सिंगो समाजका हरेक अवयवलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिको मुलधारमा आफूलाई समाहित गरेकी छिन् । दोस्रो जनताबाट अनुमोदन हुनै पर्ने निर्वाचनको प्रतिष्पर्धी दौडमा उनी सहभागी भएकी छिन् । उनलाई गर्व पनि छ हिजो आफूले कलेजमा पढाएका कैयौं विद्यार्थीहरु आज आफूसंगै चुनावी दौडमा छन् ।
गीताको सपना कालोकोट लगाएर अदालतमा चर्काचर्की बहस गर्ने थियो । चाहे जस्तो सबै भई दिएको भए अहिले उनी कुनै अदालततिर वकालती वा न्यायसम्पादनको क्षेत्रमा हुन्थिन् । तर कानुनको अध्ययनका लागि पारिवारिक पृष्ठभूमी र आर्थिक विपन्नता बाधक बन्यो । नचाहँदा नचाहँदै अर्थशास्त्र अध्ययन गरे पनि उनले अहिले पछुताउँनु परेको छैन । अर्थशास्त्रको स्नात्तकोतर अध्ययनपछि २०४६ सालमा विवाह भयो । झण्डै तीन दशक अघिको समाजमा विवाहपछि महिलाका सबै चाहना र ईच्छा बन्धक होलान् कि भन्ने पीर पनि थियो । तर उनले परिवारको साथ सोचे भन्दा पनि बढि रह्यो । श्रीमान मदन अधिकारीले सधै थप उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सधैं हौस्याई रहे । घर व्यवहारमा पनि उनलाई अल्झाएनन् । त्यसैले दमक बहुमूखी क्याम्पसमा प्राध्यापनका लागि २०४६ सालमा खुलेको उनको ढोका २८ वर्ष सम्म कहिल्यै बन्द भएन ।
उम्मेद्वारी र अपेक्षा
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले नगरपालिका वा गाउँपालिका प्रमुख दुई पद मध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि ७४४ वटै स्थानीय तहमा महिला प्रमुख वा उप्रमुख मध्ये एकजना महिला राख्नै पर्ने प्रावधान अनुरुप एमालेले गीतालाई उमपमेयरको उम्मेद्वारको रुपमा उभ्याएको हो । स्थानीय सत्तामा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको ऐन र त्यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै एमालेले गीतालाई दिएको यो जिम्मेवारीले उनको करिअर बदल्न खोज्दैछ ।
उच्च शैक्षिक क्षमता, शालिन व्यक्तित्व र प्रेरक जीवनशैलीका कारण उनको उम्मेद्वारी घोषणासँगै नगरबासी महिलाहरु उत्साहि भएका छन् । एमालेका शुभेच्छुक र कार्यकर्ता मात्रै होइन । उनको उम्मेद्वारीले अन्य दलमा आवद्ध र स्वतन्त्र महिलाहरुलाई पनि सक्षम नेतृत्व स्थापित हुनेमा आशावादी बनाएको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको भूमिकालाई शक्तिशाली र न्यायाधीकारीका रुपमा व्यवस्था गरेकाले लामो समय महिला मुक्तिको आन्दोलन र शैक्षिक जागरणमा क्रियाशिल गीता जस्ता महिलाहरुलाई निर्वाचित गराउन जरुरी रहेको मतदाताहरुको प्रतिक्रिया छ । आफ्नो किशोर वयमा न्यायधिस हुने सपना तुहाएकी गीताले उपमेयरको उम्मेद्वारीसंगै विगतको त्यो सपना विपनामा परिणत हुने अवशरको ढोका खुल्दै गरेको देखिन्छ ।
दमकको उपमेयरमा निर्वाचित भई सके पछि के गर्ने भन्ने उनले सम्झन र सोच्नै पर्दैन । सबै योजना बिगत देखिकै शैक्षिक र सामाजीक अनुभवले मस्तिस्कमा पङ्तीबद्ध गराएको छ । २८ वर्षको प्राध्यापन जीवनमा उनले दमकका प्रत्येक घरका विद्यार्थीलाई शिक्षाज्योती प्रदान गरेकी छिन् । उनले धेरै परिवारका दुई पुस्ता सम्मलाई पढाई रहँदा प्रत्येक वडा, टोल र घर घरको अवस्था नियाल्न र बुझ्न पनि पाएकी छन् । ‘दमकको कुन वडामा के समस्या छ, कुन टोलका बासिन्दाको जीवन स्तर र आवश्यकता के छ मैले राम्रो सँग बुझेकी छु’ उनले भनिन्–‘अब पनि योजना मात्र बनाएर समय बिताउने बेला छैन । जिम्मेवारी पाउन साथ काम थाल्न जरुरी छ ।’ केही उत्तरी र दक्षिणी वडाहरु अझै पनि ग्रामिण अवस्थामा नै छन् । सवै वडामा स्वच्छ पिउने पानी पु¥याउने, महिलाहरु आत्मनिर्भर बनाउने, खासगरी पुरुष बैदैशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुलाई व्यावशायमा सामेल गराउने उनका योजनाहरु प्राथमिकतामा छन् ।
आदिवासी, जनजाती, सिमान्तकृत समुदायमा शैक्षिक, सामाजीक जागरण, भाषा–कला–संस्कृतिको सम्वद्र्धन उनका लागि नगरी नहुने योजना हुन् । यस्तै ठुला योजनाका हकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु गरिएका संसारकै अग्लो बुद्धमूर्तिसहितको बुद्ध भिलेज, दमक क्लिन ग्रीन औद्योगिक पार्क, फाल्गुनन्द सभागृह, दमक भ्युटावर जस्ता योजना दमकका लागि मात्रै होइन राष्ट्रिय महत्वका योजना हुन् । यी योजनाहरु एमालेकै नीतिका कारण शुरु भएकाले कार्यान्वयन गर्न समेत एमालेकै नेतृत्व चाहिने उनको ठम्याई छ ।
अर्थशास्त्रको प्राध्यापक भएकाले पनि उनलाई श्रोत साधनको उपयोग, वितरण कसरी गर्ने राम्रोसँग ज्ञान छ । प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग, आर्थिक श्रोत परिचालन र मानवीय संसधानको वृती विकास गरि दमकको अर्थव्यवस्था देश भरिकै नगरपालिकाहरुका लागि ‘दमक मोडल’ को रुपमा स्थापित गर्ने उनको लक्ष्य पनि छ । समृद्धिको दमक मोडेल देशै भरीका लागि नमुना हुने गीताको दाबी छ ।